Waa-Dos Ka hor inta Iibinta Your iPhone
Waxaa jira yimaado wakhti marka aad u leeyihiin in ay sii daayeen telefoonka. Qof kasta oo mar mar ayey, waxaad ka heli mid cusub. Sababaha waxaa laga yaabaa in uu ka duwan yahay kiis kiis. Waxaa laga yaabaa in aadan jeclaan dambe oo aad rabto inaad soo iibsato wax kale, ama laga yaabee in aad heshay oo kaliya mid cusub sida hawl hadiyad ah, ama waxaa laga yaabaa Apple waxaa bilaabay hab cusub oo aad gabi ahaanba u leeyihiin in ay u leeyihiin. Ujeedadu waxay tahay, waxaa jira yimaado daqiiqad marka aad go'aansato inay iska iibiso aad iPhone, xataa haddii aad si dhab ah oo aan rabaa in.
Sababtoo ah oo dhan ka garab xogta iyo howlan xisaabaadka, takhalusaya casriga ah oo gaboobay oo aan waa sida ugu fudud ee ay u qabanayaan la telefoonka ah oo joogto ah. Bogga taageero Apple xitaa uu leeyahay cutubka gaar ah ka go'an in ay mowduucan. Markaa waa in aad ogaataa in ahan kaftan ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad diyaar u tahay in aad raacdo tilmaamaha, waa inaad u wanaagsan.
First of dhan, aad leedahay inay gabyaan oo ka mid kasta oo kalfadhi oo firfircoon oo aad ku xiran yihiin. Inkasta oo aad doonaysid in aad tirtirto oo dhan Chine in aad haddeer haysatidna, waa tallaabooyinkan ammaan ah oo si weyn lagu talinayaa. Sidoo kale waxa aad rabto in aad samayso waa unpair aad telefoonka ka qalab kasta oo kale oo laga yaabo in ay aad u beehsa leh, sida Watch Apple ah, your computer, iwm Tallaabada xigta waa in aad qaado waa in ay gurmad xogta aad ka iPhone oo dhan. Waxaad ku qaadan kartaa in iCloud ama in Lugood, ama labadaba, nabad kuu gaar ah ee maskaxda.
Lugood waa hab amaan ah si files gurmad aad, laakiin waxaad u baahan doontaa in ay ku xidhmaan aad telefoon cusub oo ay ku computer ah si ay u soo kabsadaan faylasha aad, ka duwan iCloud, kaas oo laga heli karaa meel kasta, in alaale inta aad leedahay khadka internetka. Lahaanshaha badbaadiyey nuqul raad raac ah ee labada meelaha idinka badbaadin doonaa, dhibaato haddii ay wax dhacaan in mid ka mid ah waxaa ka mid ah.
Sidaas oo ay tahayna, qaybta ugu muhiimsan si ay u buuxiyaan ka hor inta uusan iibin aad iPhone waa in la hubiyo aad la tirtiro wax walba oo ku yaal. Oo kanu waa wax kaftan gala. Haddii aad daryeeli ku saabsan arimahaaga gaarka ah oo aadan rabin in aad sawirrada gaarka ah ee farriimaha si aad u hesho gacmo qaldan, hubaal waa in aad tirtiro wax walba oo ka soo.
Si fudud u soo celinta aad iPhone in goobaha ay Factory aan shaqo ku samayn doonaa, oo halkan waa sababta. Inkasta oo laga yaabo in ay arkeen in wax walba waxaa lagu tirtiro, in qof kasta oo xaqiiqda qaar ka mid ah aqoon computer aasaasiga ah iyo app gaar ah loogu talagalay in lagu sameeyo. Tani waa sababta oo ah marka aad iska tirtirto wax drive ah, kaarka SD ah, ama xusuustu telefoonka aad, files ee aan weligood tageen, halkii ay "siiyey fasax" in la overwritten. Oo haddii aan waxba laga overwritten on top iyaga ka mid ah, ay la soo kabsaday karo.
Xal An kale in ay nadiifiso xogta oo dhan guud ahaan iyo joogto waa SafeEraser Wondershare ah. Tani waa app ah computer gaar ahaan loogu talagalay in ay kaa caawiyaan fiican meel bannaan oo ku qalab aad. Waa arrin aad u fudud in la isticmaalo, iyo waxa ay qaban karaan hawlaha kala duwan. Waxaad iskaan kartaa files ku meel gaar ah iyo iyaga tirtirto, ama aad isticmaali karto si aad cadaadin sawirada iyo faylasha kale. masixi xogtaada gaarka, ama faylasha hore tirtiray, in weli ay diyaar u yihiin dib u soo kabashada, ama aad u isticmaali kartaa in kiiskan, si ay u tirtiri telefoonka.
Waa faa'iidooyinka ugu waaweyn waxay yihiin:
Waafaqsan yahay nidaamka macruufka ah hawlgalka, oo ma aha oo kaliya. Waxaa loo isticmaali karaa muddo ku dhow smartphone kasta oo lagu iibiyo suuqa.
Waa arrin aad u user-friendly oo dareen leh. Waxaad dhab ahaan ma u leeyihiin in ay wax ka badan xirfadaha kombiyuutarka aasaasiga ah ee looga baahan yahay shaqada computer si ay u awoodi karaan in ay isticmaalaan. Way fududahay in la fahmo iyo in la isticmaalo Dhamaan qaababka.
Waxaad u isticmaali kartaa in ay tirtirto nooc kasta oo files ama barnaamijyadooda ka telefoonka, oo ay ku jiraan xiriiro iyo qoraallada, Bookmarks, goobaha nidaamka, wac taariikhda, ID iCloud, Game Center, barnaamijyadooda, profiles, iyo macluumaad kasta oo kale oo lagu kaydin karaa karayaan qalab aad .
3.289.116 oo qof ayaa u soo bixi
Halkan waxa ku jira talaabooyin aad u baahan tahay in ay qaataan si ay u tirtirto faylasha aad u wanaagsan, iyadoo la isticmaalayo Wondershare SafeEraser:
First of dhan, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo iyo rakibi SafeEraser Wondershare si aad u computer. Ka dib markii in aad u ordi karaan. Taas ka dib, waa in aad ku xidhi aad iPhone in kombiyuutarka via cable USB ah. Hubi in aad saxiixday ka mid ah aad iCloud, si aan la lumin macluumaad kasta oo khalad ah. Ka dib markii barnaamijka waxay aqoonsan tahay qalab aad, waxaa la furi doonaa ilaa uu furmo, iyadoo wadata shan fursadaha si aad u doortaan. Qofka ugu horeeya ee aad bidix - masixi xogta oo dhan - waa mid ka mid ah in aad u baahan tahay markan.
Ku qor sanduuqa erayga "tirtirto". Tani waa ammaan qiyaas, si loo hubiyo in hannaanka takhalusid aad ayaan ku bilaabanin si qalad ah.
Sug files si aad u la tirtiro. Ma jiraan wax badan oo hadda marka laga reebo in ay sugto in la sameeyo oo aad samayn karto waa.
Marka habka takhalusid waa dhameystiran, screen cusub erayga "Waxaa buuxiya" muuqan doonaa. Marka aad halkan ku helay, geeddi-socodka lagu cirib tirno aad telefoonka ka soo baxay waxaa loo sameeyaa.
Mid ka mid ah talaabo dheeraad ah oo aad u baahan tahay in la qaato ka hor inta taabato telefoonka qof kale waa in ay hubiso in aad saaro kaadhka SIM ah, tan iyo markii ay sidoo kale waxaa ku jira qaar ka mid ah macluumaadka adiga kugu saabsan, oo waxaad ku xidhaa bixiyaha adeegga mobile. Aan xuso in aad weli u isticmaali kartaa telefoonka ah oo kala duwan, sidaas darteed ma jiro baahi loo qabo in ay iska tagaan.
Marka aad raaceen talaabooyin kor ku xusan, waxaad diyaar u tahay (ugu yaraan ka barta jirka of view) in ay ka qeyb siyaabo aad iPhone. Haddii aad rabto in aad u iibiso, waxaa jira goobo gaar ah oo ganacsi online in aad lacagta ku siin doonaan, waayo, ama waxaad aadi kartaa Arbacada ah, Amazon, craigslist, ama boosteejo kale oo dhiirigelineysa is-weydaarsiga u dhexeeya dadka, oo isku day in aad halkaa ku iibiyay ah . Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira wax badan oo fursado ah in aad isku dayi kartaa, iyo wax badan oo ka mid ah lacagaha kala duwan ee aad ku heli karto, laga bilaabo hadiyad-kaarka, vouchers dhimis, oo xitaa lacag, iyo ilaa bitcoins, ee ay bixiyaan goobaha qaar ka mid ah.
Guide Full in ay nadiifiso Your Phone
2 Siyaabaha kala soo bixi MySpace videos in MP3
Sida loo guud Masax Android Phone
Sida loo Delete Videos / Roll Camera ka iPhone
Sida loo Delete Messages Facebook on Facebook.com
Sidee Si joogto ah Delete All Content Ka hor inta Iibinta Your iPad?
Sida loo Cad Internet History joogto ah ula 1 Click
Sida loo Cad Cache ee Internet Explorer
> Resource > masixi > Waa-Dos Ka hor inta Iibinta Your iPhone